Global Voices teny Malagasy » Bangladesh: Shawpno Rath – Sekoly Iray Ho An’ireo Ankizy Avy Eny Ambany Tanàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Mey 2012 14:24 GMT 1	 · Mpanoratra বিজয় Nandika (en) i Aparna Ray, avylavitra
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fampandrosoana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Vonjy Voina, Katroka 7 Miliara
Tao an-drenivohitr'i Bangladesh, Dhaka, rehefa mandao ny tokantranony isa-maraina handeha hamonjy sekoly ny andian'ankizy iray, dia misy andian'ankizy iray hafa kosa mivoaka ho eny an-dalambe hiasa hitady izay hivelomana. Ny arabe no sehatra iray manome azy ireo fahafahana mahazo izay tokony hivelomany. Ny sasany amin'ireny ankizy ireny dia manangona fako, ny sasany mivarotra karazan-javatra samihafa – dite sy sigara ankoatry ny zavatra hafa.
Ny fangon'ny Swapnorath, noforonin'i Dwipangsu Paul, avy ao Kolkata
Ho an'ireny ankizy ireny, zavatra tsy takatra ny sekoly – zavatra mitoetra ho nofinofy fotsiny ho azy ireo, satria raha ny toerana niavian-dry zareo, misy hantsana lalim-be eo anelanelan'ny nofiny sy ny zava-misy henjana iainany andavanandro. Na izany aza, nisy andian-jatovo iray nandray andraikitra mba hanatanteraka farafaharatsiny ny nofin'ny sasantsasany amin'ireny ankizy ireny. Namorona sekoly ho an'ireo sahirana sy tsy manan-katao avy eny amin'ny ambany tanàna ireny ry zareo. Nomena anarana sahaza azy ilay sekoly ka natao hoe “Shawpno Rath” (Kalesin'ny Nofy).
Ny Lehiben'ny Mpanonofin'ny Shawpno Rath – Shamima Nargis Shimu, miaraka amin'ireo mpianany. Sary nalaina tao amin'ny vondrona.
Toy izao no nanombohan'ny dian-dry zareo ireo :
Raha teny an-dàlana hamonjy ny toeram-piasany ny tovovavy iray dia nahita ankizy vitsivitsy nikaroka zavatra tao anaty fanariam-pako. Toa tsapan'ity tovovavy ity hoe mitady izay mba nofinofiny angamba ry zareo ireo.
Naniry hanao zavatra ho an'ireto ankizy izy, niresaka tamin'ireo namany sy mpiara-miasa aminy momba izay mba azon'izy ireo atao. Tany am-boalohany, tapaka ny hevitra fa ho indray mandeha isan-kerinandro ihany, hanome sakafo an'ireto ankizy ry zareo sady hikarakara fialamboly ankalamanjana eo amin'ny manodidina ihany.
Ny niandohan'ny dian'ny Shawpno Rath niadiana hevitra tao an-jaridainan'ny Chandrima park. Sary nalaina tao amin'ny pejy Facebook-dry zareo. Nampiasaina rehefa nahazoaana alàlana.
Tsy tany amin'ny biraoko akory fa teny an-jaridaina no nanomboka ny fifanakalozan-dresaka mikasika ity fiaraha-mientana ity – tao amin'ny Chandrima Udyan (zaridaina):
Ho an'io fifanakalozan-dresaka io dia nofinidinay ny Chandrima Udyan, satria io no toeram-pitadiavana ho an'ny maro amin'ireo ankizy ireo. Ny maro amin'izy ireo dia ao anatin'ny sehatra fivarotana voninkazo, sôkôlà, voanjo, dite, sigara, sns., ho an'ireo mpifankatia sy ireo olona tonga mitsidika ilay zaridaina. Nahazo akony tsara tamin'ilay hetsika nataonay izahay. Mitombo isanandro isanandro ny isan'ny ankizy. Isaky ny Sabotsy, entina eny ny boky hamakiana tantara ho azy ireo. Faly ery ny ankizy ary efa zatra mamadibadika ny boky, fa tsy afaka mamaky. Mba ho afaka mamaky teny dia ilain-dry zareo ny fanabeazana, ary amin'izy ireo ny fanabeazana dia midika hoe miditra an-tsekoly, saingy ho an'ireo ankizy ireo, ny sekoly dia mbola dia lavitr'ezaka hafa indray noho izay efa nizorany. Noho izany, tsy maintsy nionona tamin'ny famadibadihana nitety pejy anaty boky fotsiny ry zareo, mikitika ny sary sy ny voan-teny. Teo ampahitàna ny fahalinan'ireto zaza amin'ny zavatra misoratra dia nanapa-kevitra nanangana sekoly ho azy ireo ilay andian-jatovo. Tapaka fa hatao hoe – Shawpno Rath (Kalesin'ny Nofy) ny anaran'ny sekoly
Lakilasy eny am-poto-kazo
Mba hahafahana manomboka lakilasy amin'ny ara-dalàna, dia mila zavatra maro ny tsirairay – trano fianarana, lakilasy, boky, kahie, mpampianatra, fàfana mainty, famafàna fàfana ary mpianatra. Na izany aza, ho an'ity sekoly ity, tsy voavory ireo fepetra rehetra ireo. Kanefa, isaky ny Sabotsy, misy foana ny fampianarana eo ambanin'ny hazo iray ao an-jaridaina. Ilaozan'ireo ankizy ny asany ary tonga mba hanatrika ny fampianarana ry zareo, na dia midika fahabangan'ny fivelomana aza izany ho azy ireo. Tena ankafizin-dry zareo fatratra ireny lakilasy ireny. Tsikelikely, nanomboka nitombo ny isan'ireo mpianatra. Ary tsy ela, tonga ny filàna tsy maintsy hitady efitrano fianarana.
Ireo mpianatra miaraka amin'ny mpampianatra azy ireo tao amin'ny efitrano vaovao fianarany. Sary nalaina tao amin'ny pejy Facebook-n'ny vondrona. Fampiasàna nahazoana alàlana..
Nahazo adiresy vaovao ny sekoly
Niala tao Chandrima Udyan (zaridaina) ny sekoly ary nifindra ao amin'ny adiresy 10 Mirpur Road, izay ahitàna efitrano iray nofaina mba hamapandehanana ny sekoly. Eto dia misokatra andro dimy isan-kerinandro ny sekoly ary ireo mpianatra dia nanomboka nanaraka ny fampianarana amin'ny ora feno. Ankizy 30 no nanombohan'ny lakilasy, ary mpampianatra 2. Satria marobe ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana no tonga mba hanaraka ny fampianarana, avy eo amin'ny tanàna ambany manodidina eo ihany, dia mitohy mitombo hatrany ny isan'ny mpianatra.
Mpianatra ao amin'ny Shawpno Rath mankalaza ny taom-baovao. Sary nalaina tao amin'ny Pejy Facebook-n'ny vondrona. Nampiasaina rehefa nahazoana alalàna.
Shawpno Rath – foibe hanabeazana ny olon-dehibe ihany koa
Eo am-pahitàna ny zanany mamonjy sekoly, ny sasany tamin'ireo ray aman-dreny koa dia nanomboka naniry ny mba hahazo fahafahana mahazo fampianarana ara-dalàna. Noho izany dia nanitatra ny asany mba hahatafiditra hatramin'ny fampianarana olon-dehibe koa ny Shawpno Rath. Amin'izao fotoana, olon-dehibe 20 no mpianatra ao amin'ilay sekoly – ireo izay tsy mba nanana fahafahana nandeha an-tskoly tamin'ny andron'ny fahazazàny.
Ity sary ity dia mampiseho ny vina arahan'ny Shawpno Rath amin'ny maha mpanamora, sy tànana manampy azy. An'i Raymond Habibur ny sary. Nalaina tao amin'ny pejy Facebook-n'ny vondrona. Nampiasaina rehefa nahazoana alàlana.
Ny vinan'ny Shawpno Rath
Ao amin'ny Pejiny Facebook , ny Shawpno Rath dia miresaka momba ny vina sy ny tanjony :
Ny “Shawpno Rath” dia fikambanana tsy natao hitady tombony natsangana tamin'ny 2010 miaraka amin'ny fomba fijery hoe hampiroborobo ny resa-panabezana sy ny fahasalaman'ireo ankizy sahirana eto amin'ny firenenay.
Ny ankamaroantsika dia mihevitra fa zo efa azy ireo filàna fototra eo amin'ny fiainana : sakafo, rano, fialofana, fahasalamana, fanabeazana ary ankohonana. Saingy misy ankizy an-tapitrisa izay tsy mba manana an'ireny filàna fototra ireny, izay tsy mba manana fanantenana ny amin'ny hoavy. Ny tanjonay dia ny hanampy hanomezana ireny filàna ireny ho an'ireo ankizy mahantra manerana ny firenena ary hifantoka amin'ny fampandrosoana faobe hikatsahana ny hampihenàna ny fàkan'ny fahantrana.
Ireo mpianatry ny Shawpno Rath mandray anjara aminà Fifaninanana Mipetraka Manao Sary. Sary nalaina tao amin'ny pejiny Facebook. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny vinan'ny Shawpno Rath dia i Bangladesh afaka amin'ny fahantrana. Niaraka tamin'io vina io no nentin-dry zareo nanomboka ny diany, ary fantany tsara fa mbola lavitr'ezaka ny làlana hodiavin-dry zareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/31/33798/